Thenga i-Allylestrenol powder (432-60-0) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / I-Allylestrenol powder (432-60-0)
SKU: 432-60-0. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-allylestrenol powder (432-60-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Allylestrenol powder, igama lophawu lweGestanin kunye neTurinal phakathi kwabanye, luyi-progestogen ehambelana nesakhiwo seprogesterone esinikwe ngokusweleka kwesisu esongelwayo kunye nokukhusela, kwaye ukukhusela abasebenzi abangaphambi kwesikhathi. Nangona kunjalo, ngaphandle kwe-progesterone ye-progesterone, ukusetyenziswa okunjalo akusayi kucetyiswa.
Allylestrenol powder ividiyo
I-Allylestrenol powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Allylestrenol powder
Umjikelezo we-Allylestrenol powder
Amagama eKhemikhali: i-Allylestrenol powder
Amagama omGrama: iGestanin kunye neTurinal phakathi kwamanye, i-Allylestrenol powder, i-Gestanin powder, i-powder Turinal, i-432-60-0
Ukusetyenziswa kwe-Allylestrenol powder
Thatha i-Allylestrenol powder (i-CAS 432-60-0) ngomlomo njengoko iyalathwayo, ingathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya. Ngaba unakho umyeza wokutya ukukhusela i-GI upset. Landela zonke izikhokelo kwi-package package. Ukuba awuqinisekanga malunga naluphi na ulwazi, qhagamshelana nogqirha wakho okanye umasipala.
Tshela ugqirha wakho ukuba imeko yakho iqhubeka okanye ibuhlungu okanye ukuba uhlakulele iimpawu ezintsha. Ukuba ucinga ukuba unokufumana ingxaki enkulu yonyango, fumana uncedo lwonyango ngokukhawuleza.
I-Allylestrenol powder iyona nto igcinwe kwiqondo lokushisa elingaphandle kokukhanya okuthe ngqo kunye nomswakama. Ukukhusela umonakalo weziyobisi, akufanele ugcine i-Allylestrenol powder kwindawo yokuhlambela okanye efrijini. Kukho iindawo ezahlukeneyo ze-Allylestrenol powder ezingaba nezidingo zokugcina ezahlukeneyo. Kubalulekile ukuba uhlolisise iphakheji yemveliso yemiyalelo yokugcinwa, okanye ubuze i-pharmist yakho. Ukukhusela, kufuneka ugcine onke amayeza kude nabantwana kunye nezilwanyana.
Akufanele uhluthe i-Allylestrenol powder phantsi kwindlu yangasese okanye uwathulule kwi-drain ngaphandle kokuba ulandelwe ukwenza njalo. Kubalulekile ukulahla ngokufanelekileyo le mveliso xa iphelelwe yisikhathi okanye ayisadingeki. Qhagamshelana ne-pharmist yakho ukuze uthole iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nendlela yokukhupha ngokukhuselekileyo umkhiqizo wakho.
Iyiphi imilinganiselo ye-Allylestrenol powder
Iyintoni umthamo we-Allylestrenol powder (i-Gestanin powder) kumntu omdala?
Umdala: 5 mg ngomlomo kathathu ngosuku ngeentsuku ze-5-7.
Iyintoni umthamo we-Allylestrenol powder kumntwana?
Isilinganisi asizange senziwe kwizigulane zezilwanyana. Kungaba yingozi kumntwana wakho. Kuhlala kubalulekile ukuqonda ngokupheleleyo ukhuseleko lweziyobisi ngaphambi kokusetyenziswa. Nceda uqhagamshelane nogqirha wakho okanye ukhemistri ngolwazi olungakumbi.
I-Allylestrenol powder ifumaneka njani?
I-Allylestrenol powder iyatholakala kwiifom zezilingo ezilandelayo kunye namandla:
Ithebhulethi, ngomlomo: 5 mg.
Yintoni endiyenzayo xa ngethuba loxakeka okanye ukudlula ngaphezulu?
Kwimeko yongxamiseko okanye ukudlula ngaphezulu, biza iinkonzo zakho zengxamiseko zengingqi okanye uye kwigumbi elifutshane elisondeleyo.
Ukuba uphoswa umthamo we-Allylestrenol powder, thatha ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ukuba phantse ixesha lesosi sakho esilandelayo, weqa idosi ephosakeleyo kwaye uthathe umthamo wakho oqhelekileyo njengoko uhleliwe. Musa ukuthatha i-dose ephindwe kabini.
I-Hello Health Group ayinikezeli ngcebiso, unyango okanye unyango
Indlela i-Allylestrenol powder isebenza ngayo
I-Allylestrenol powder ifana nesakhiwo kwaye isebenza kwiprogesterone. Iprogesterone ikwabelana ngezenzo ze-pharmacological ze-progestins. Iprogesterone ibopha kwi-progesterone kunye ne-estrogen receptors. Iiseli ezijoliswe kuqukwa ziquka umzila wesibalo sokuzala, intlanzi ye-mammary, hypothalamus, kunye ne-pituitary. Emva kokubophelwa kwi-receptor, iprogesterone njengeProgesterone iya kuncipha ukwanda kwe-gonadotropin yokukhulula i-hormone (GnRH) ukusuka kwi-hypothalamus kwaye ixhamle i-HH yokuqala (i-hormone ye-luteinizing). Kubasetyhini abane-endrogen eyaneleyo ye-estrogen, i-progesterone iguqula i-endometrium eninzi kwi-secretory eyodwa. Iprogesterone ibalulekile ekuphuhlisweni kweethambo eziqhelekileyo kwaye kuyimfuneko ukwandisa ukuthobela i-endometriyamu ekumisweni kombungu. Emva kokuba i-embryo ifakiwe, i-progesterone yenza ukukhulelwa. Iprogesterone ivuselela ukukhula kweethambo ezinobomi be-mammary and relaxes uterine muscle smooth. Inomsebenzi omncinane we-estrogenic kunye ne-androgenic.
I-glucuronide kunye ne-sulfate conjugates yokukhulelwa kwe-pregnanolol kwaye i-pregnanolone ixutywe emcinini kunye ne-bile. I-progesterone metabolites echithwe kwi-bile ibangelwa ukubuyiswa kwakhona kwe-enterohepatic okanye inokuthi ikhutshwe emanzini. I-metgesolone ye-progesterone ixutywe ngokuyinhloko yizintso.
I-Allylestrenol powder ilawulwa kwizigulane eziye zaxhatshazwa ngamathambo amaninzi, iintsholongwane zangaphambili okanye i-prostatic hyperplasia. Iyeza liphazamisa i-hormone enoxanduva lokukhutshwa kwe-gonadotropin kunye nokunciphisa ukunyuka kwe-hormone ye-pre-ovulatory luteinizing hormones.
Kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho kwaye ufumane ukuxilongwa ngokugqithiseleyo kwimeko yakho yokukhulelwa kunye nezinye izimo zonyango ezinokuthintela ukukhulelwa okuphumelelayo ngaphambili. Kumele ugqirha ugqirha wakho malunga naluphi na ukuphazamiseka okukhoyo okanye izifo onazo, naluphi unyango olwenziwe kwizilwanyana okanye ukutya, okanye ukuba unakho nawaphi na amapilisi e-hormonal, isongezelelo sesondlo okanye ezinye iziyobisi.
Kumele uthathe izilwanyana ngokulumkisa kwaye njengoko ugqirha ugqirha wakho ngokukodwa ukuba unomonde wesifo sikashukela, u-migraine, ukuhluthwa, isifo se-asthma sinesifo senhliziyo, isifo senqatha okanye isibindi, okanye ukuba awuhambisani ne-glucose.
Kukho iziphumo ezichaphazelekayo ezibandakanya ukuhlanza kunye neentlanzi, iintloko zezinwele, izilwanyana ezinjenge-rashes, umlenze, ubomvu, ukuvuvukala komqala, ulwimi, imilomo, umbono otyhafayo kunye nesisu, ukukhathazeka kwesisu kunye nesisu esiswini, ukugqithwa okanye ukuhanjiswa, ukuguquka uxinzelelo lwegazi. Kumele ugweme ukuqhuba okanye ukuphuma ngaphandle kwangoko emva kokuba uthathe iyeza.
I-Allylestrenol powder (i-CAS 432-60-0)
Ukuthengiswa kwe-Allylestrenol powder
Ngaba i-Allylestrenol powder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
I-Allylestrenol powder isetyenziselwa unyango, ukulawula, ukuthintela, nokuphuculwa kwezifo ezilandelayo, izimo kunye neempawu:
Ukulahleka okuqhelekileyo kokukhulelwa
-Ukukhula kwexesha elingaphandle
I-Allylestrenol powder ingasetyenziselwa iinjongo ezingaboniswa apha.
Imiphumo emibi yeGestin (i-Allylestrenol powder) ibandakanya abo balwe ngezantsi. Ukuba nayiphi na yezi ziphumo ziqhubeka, okanye zibuhlungu, kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho ngokukhawuleza.
Kuye kwaphawulwa ukuba iintsana ezizalwe ngumama ezithathile eli gulana zinokuthi zibe neqondo elingaphansi komzimba, kodwa le nto ingacingelwa ukuba ingaphephile.
Indlela yokuthenga i-Allylestrenol powder evela kwi-AASraw